Isbadal lagu samaynayo taakulada ururada Dhallinyarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sharuucda cusob oo qaar kamid ah ururada dhallinyarada saameyn weyn ku yeelan doonta.Foto: Ida Rådström
Isbadal lagu samaynayo taakulada ururada Dhallinyarada
La daabacay tisdag 31 juli 2012 kl 12.46
Dhamaadka sannadka waxaa wax laga badalayaa sharuucda dalka ee taakulada dowligaa ee la siiyo ururada dhallinyarada. Taakulada dowladda oo ah 250 malyon oo karon ayaa loo badeli doona lacag go'an oo si siman loogu qaybiyo ururada dhallinyarada.
Lena Hallberg oo ah gacanyare ka ah Ungdomstyrelsen ayaa isbadelka sidaan u soo koobaysa.
- kuwo ugu farxada badnaanaya waxay noqonayaan kuwo haysta 1 000 ilaa 3 000 oo xubnood, oo aan horay qayb kaga heli jirin dhaqaalaha isbabadahsa balse heli jiray qaybta joogtada ah. Ururada matala dadka naafada ah kuwaas ayaa ugu farxad badan, waayo waxay heli doonaan taageero dhaqaale oo aad u koraysa, ayey tiri Lena Hallberg.
lakiinse waxaa jira ururo ku qasaari doona arintaan, madaama bixinta lacagta taageerada dowligaa aysa ku dhisnaan doonin inta xubin ee kamidka ah ururka siday awelba ahayd.
Ururka Sverok oo ah ururka ugu weyn ee dhallinyarada dalkaan Iswedhen ahna urur ay ku midoobeen dadka ciraahaya xiiseeya ayaa isbadelka lagu sameenayo sharuucda taageerada dowligaa ee la siiyo ururada dhallinyarada darteed weyni doona labo malyan oo karon.
- waxaan u aragnaa arin xun in isbadalkaan la sameeyey oo ah mid degdeg loo meel mariyey. Go'aanka waxaan helaynay bishii maj waxaana la hirgelnayaa bisha september, ayey tiri Rebecka Prentell oo ah gudoomiyaha Sverok.